Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Wafti ka socday Midowga Afrika[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Wafti ka socday Midowga Afrika[Sawirro]
MUQDISHO – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qaabilay wafti sare oo ka socday ururka Midowga Afrika oo booqasho ku tagay magaalada Muqdisho.
Waftigan ayaa waxa hoggaaminayey Madaxa Ammaanka Midowga Afrika Danjire Ndumiso Ntshinga oo booqasho saddex maalmood ah ku tagtay Muqdisho,waxayna sidoo kale kulan la qaadatay Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jawaari.
Madaxda sare ee dalka Iyo Waftigan ayaa kawada hadlay sidii loo horumarin lahaa howlaha ay ciidamada AMISOM ka hayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ,sidoo kalena loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliya si mustaqbalka dhow ula wareegaan amniga dalkooda.
Danjire Ndumiso iyo waftigeeda ayaa kormeer ku tagay xeryaha ciidanka midowga Afrika iyagoona u kuurgalay heerka uu gaarsiisan yahay wadashaqeynta ka dhaxeysa iyaga iyo ciidanka Qaranka Soomaaliyeed oo dagaal kula jira Al-Shabaab.
Ciidamada AMISOM ayaa muddo 10 sano ah ka hawlgalayey Soomaaliya ,waxaana dhawaan la kordhiyey muddada ay joogayaan Soomaaliya.